Eng Yariisow oo ka hadlay qorshaha uga dagsan dhinacyada amniga, isku-xirka bulshada iyo maamul wanaagga – idalenews.com
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) oo marti ku ahaa barnaamijka Dood Furan ee ka baxa Telefeshinka Qaranka ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay maamulkiisa iyo halka uu hiigsanayo.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ka hadlayay burburka jidadka magaalada ayaa xusay in dhismaha waddooyinku ay u leeyihiin mudnaan sare, si taas looga dhabeenaya bulshada Soomaaliyeed laga doonayo in kaalintooda ay qaataan. Iyadoo laga duulayo qorshaha isku tashigana bishii hore la bilaabay dhameystirka jidka Soddonka, uuna ku xigi doonno dhismaha jidka Liido. Sidoo kale waxuu sheegay in bisha Juun ee soo socota la bilaabayo waddooyinka xaafadaha (dhagaxa inter log) oo dhismahooda ay gacan ka geysanayso dawladda Jarmalka.
Warxasaasi ah: Taliska Xoogga oo Ciidamadii ilaalada kala noqday Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka